असार अन्तिममा उपहारका गैंडा लिन विशेष विमान आउदै - असार अन्तिममा उपहारका गैंडा लिन विशेष विमान आउदै
असार अन्तिममा उपहारका गैंडा लिन विशेष विमान आउदै
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १८ असार 47 Views
काठमाडौं । नेपालले उपहार स्वरूप दिने एकसिंगे गैंडा लिन चिनियाँ विशेष जहाज यहि महिनाको अन्तिममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने भएको छ ।
यहि महिनाको २८ गते आउने विमानमा भेटेरिनरी चिकित्सकरकेयर टेकरसहितको टोली पनि आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकाका अनुसार नेपालले दिएको जोडी उपहार गैंडा बोकेर सोही दिन चार्टर जहाज चीन उड्नेछ । सँगै नेपाली भेटेरिनरी चिकित्सकसहितका विशेषज्ञ पनि जानेछन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले भाले ‘भद्र’ र पोथी गैंडा ‘रुपसी’ चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । मन्त्रालय र विभागले गतसाता उपहार दिने गैंडाको नाम जुराएका हुन् । गैंडा हस्तान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रमको तयारी भइरहेको महानिर्देशक खडकाले बताए ।
अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनलाई दुई जोडी एकसिंगे गैंडा उपहार दिने निर्णय भएको थियो । अर्को जोडी भने आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा मात्रै हस्तान्तरण गरिनेछ । ‘साइटिस कानुन’ मा एक आवमा एक जोडी मात्र उपहार दिन सकिने व्यवस्था छ ।
उपहार दिइने गैंडालाई चितवनको सौराहादेखि विमानस्थलसम्म ट्रकमा हालेर ल्याइनेछ । ती गैंडा सौराहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ‘जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र’ को ‘पिट बोमा’ मा राखिएको छ । नेपाली मिस्त्रीले तयार गरेको काठको खोरमै बसेर ती गैंडा चीन पुग्नेछन् । ‘भद्र’ र ‘रुपसी’ लाई छुट्टाछुट्टै खोरमा राखिनेछ ।
गत वैशाखमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरबाट गैंडाका तीन बच्चा नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रमा राखिएको छ । उपहार दिइने अर्को एउटा गैंडाचाहिँ उद्धार गरिएमध्येकै हो । ती गैंडालाई दूध, स्याउ, केरालगायत फलफूल, बन्दा र घाँस खुवाएर उच्च निगरानीमा राखिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार उपहार दिइने गैंडा डेढदेखि दुई वर्ष उमेरका छन् ।
अर्यालका अनुसार गत शुक्रबार चीनबाट आएका भेटेरिनरी चिकित्सक वाङ र नेपाली भेटेरीनरी चिकित्सकको टोलीले गैंडाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । परीक्षणमा चिनियाँसहित नेपाली चिकित्सक कमल गैरे र अमिर सडौलासहित भेटेरिनरी प्राविधिक पुरुषोत्तम पाण्डेलगायत संलग्न छन् । चिकित्सकका अनुसार सबै गैंडा स्वस्थ छन् । गैंडा स्वेदश भित्र्याउन चीनले साइटिस सचिवालयबाट प्रमाणपत्र लिइसकेको छ ।
२०७५, १८ असार
पूर्व माओवादी ‘हाई–कमाण्ड’का नेताको चीन भ्रमण संयोग कि योजना ?
दुई सय घर अन्धकार
‘जेब्राक्रसिङ’को सङ्केत नहुँदा सडक वारपार गर्न कठिनाइ
विद्यार्थी आँपका रुखमुनि बसेर पढ्छन !
श्रीलंका एसिया कपबाट बाहिरियो, अफगानिस्तानको पहिलो जित